Miomana amin'ny famafazana voly ririnina. Misafidy ireo zezika fararano mety - magazine "Potato System"
Tena Torohevitra momba ny manam-pahaizana manokana
Miomana amin'ny famafazana voly ririnina. Misafidy ireo zezika fararano mety
в Torohevitra momba ny manam-pahaizana manokana
Ho an'ny faritra maro eto amin'ny firenentsika, ny voamadinika amin'ny ririnina no vokatra lehibe indrindra. Ny anjarany amin'ny velaran-tany voafafy tao amin'ny Federasiona Rosiana, hoy i Rosstat, dia mihoatra ny 23% (18,7 tapitrisa hektara - ho an'ny fijinjana amin'ny taona 2021), ary any amin'ireo Distrika federaly Kaokazy atsimo sy avaratra - maherin'ny 60%. Ny varimbazaha amin'ny ririnina, ny vokatra masaka tamin'ny taon-dasa dia nahatratra 63,2 tapitrisa taonina (raha oharina amin'ny 22,7 tapitrisa taonina ny varimbazaha), izay manome ny fijinjana voa lehibe ary manompo ho antoky ny fiadanam-pirenena. Ao anatin'ny taona tsy mahasoa indrindra, ny tantsaha dia miankina amin'ny voly ririnina: noho ny rafi-pitomboana mivoatra, ireo vokatra ireo dia mahatohitra ny haintany sy ny hatsiaka, izay mamela ny fambolena hahazo fijinjana azo antoka ary, farafaharatsiny, "mandeha amin'ny aotra".
Ka ny vanim-potoana 2020/2021 dia nivadika ho sarotra ho an'ny faritra fambolena lehibe any Russia: maina ny fararano, ary orana sy mangatsiaka ny lohataona. Mino ny manam-pahaizana fa noho ny toetr'andro tsy mahafinaritra dia hihena ny habetsaky ny fijinjana ny ririnina raha oharina tamin'ny taon-dasa, saingy mbola hijanona ho avo ihany.
Tsy fantatra izay olana atrehin'ny taona manaraka, fa eo an-tananay kosa ny hikarakara ny voly ary hieritreritra ny safidin'ireo teknolojia, zezika ary karazana.
Mba hisafidianana ireo zezika mineraly fototra mety dia ilaina ny mahatakatra ny filan'ny ririnina amin'ny fararano.
Zezika sarotra. Topy maso ny endrika mahomby indrindra
Ammophos dia zezika marobe sy mahomby izay manana fampiharana fampiasa amin'ny karazan-tany maro karazana any amin'ny faritra klimatika rehetra ao amin'ny firenena. Izy io dia iray amin'ireo zezika phosphate be fatratra - 52 g P2O5, 95% mety levona anaty rano, izany hoe mora idiran'ny zavamaniry ilay singa. Mahomby indrindra miaraka amin'ny azota amoniôma.
Fa maninona no zava-dehibe tokoa ny manome vokatra ho an'ny fôsôroôra amin'ny dingana voalohany amin'ny fitomboana? Ny phosforus dia tsy angovo ihany, fa singa tena ilaina amin'ny metabolika gliosidratika sy ny fitambaran'ny fitambarana organika sarotra. Izy, ankoatry ny fanentanana ankapobeny ny fizotran'ny metabolika sy ny fitomboana, dia tompon'andraikitra amin'ny famoronana rafi-pitomboana mahery vaika, izay tena manan-danja tokoa amin'ny voly ririnina. Ammophos dia manana toetra ara-batana sy simika tena tsara, mora ampiharina, manamafy ny rafitra faka, mampitombo ny fanoherana ny haintany sy ny aretina.
Taham-fampiharana: hatramin'ny 70 ka hatramin'ny 150 kg / ha.
Manana ny kalitaon'ny ammophos rehetra, ity vokatra ity dia loharano solifara, kalsioma ary maneziôma tena tsara. Ireo singa rehetra ireo dia hita ao amin'ny NPS 20: 20: 13,5 sulfoammophos novokarin'i EuroChem. Ny atiny voalanjalanja amin'ny azota sy ny phosoreo dia manome sakafo mahavelona ilaina, ary ny atin'ny solifara dia mampiavaka an'io zezika io. Ilaina ny solifara amin'ny zavamaniry amin'ny fomba mitovy amin'ny azota: satria ampahany amin'ny proteinina izy io, dia mandray anjara amin'ny fizotran'ny metabolika tena ilaina. Ho fanampin'izay, ary tena zava-dehibe amin'ny voly ririnina, ny solifara dia mandray anjara amin'ny fitomboan'ny fanoherana ny zava-maniry amin'ny aretina, ary izy koa dia iray amin'ireo singa fototra mampitombo ny kalitaon'ny voa.
Ny Sulfoammophos dia mety indrindra amin'ny faritra tsy misy solifara ambany ary ilaina amin'ny fahazoana vokatra kalitao, nefa miaraka amin'izay dia mora vidy kokoa noho ny ammophos.
Taham-fampiharana: hatramin'ny 100 ka hatramin'ny 200 kg / ha.
Mety amin'ny fampiharana any an-tsaha misy farafahakeliny sisa tavela amin'ny vokatra teo aloha, aorian'ny vokatra miaraka amina potasioma lehibe na any an-tsaha tsy ampy potasioma amin'ny tany. Amin'ireny zezika ireny, ny endrika nitrate sy amoniôma dia hita ao anaty refy mitovy, noho izany, etsy an-danin'izany, noforonina ny sakafo mahavelona tsara indrindra, ary etsy ankilany, mihena ny fatiantoka azota. Ankoatr'izay, noho ny voajanahary voajanahary amin'ny akora, ny zezika dia misy solifara, kalsioma ary manezioma. Ny safidin'ny raikipohy dia miankina amin'ny firafitry ny tany sy ny fanesorana ny voly. Tsara kokoa ny manome tombony ny marika manana fosforôly sy potasioma avo lenta, satria izy ireo dia manan-danja kokoa amin'ny zavamaniry amin'ny fararano. Raha ambany noho ny antonony ny atin'ny singa roa dia tsara kokoa ny misafidy ny marika 10:26:26.
Amin'ny toe-javatra misy ny votoatin'ny potasioma ambany dia voamarika any an-tsaha manohitra ny fiandohan'ny fampiasana zezika fosfor tsy tapaka, azonao ampiasaina tsara ny marika 14:14:23. Ny potasioma dia handray anjara amin'ny fanoherana ireo zavamaniry amin'ny toe-javatra miovaova ny mari-pana maranitra sy ny tsy fahampian'ny hamandoana. Ny vokatry ny fampiasana zezika potash dia tena hita amin'ny tany maivana, na izany aza, amin'ny fatra kely dia tsy maintsy ampiharina ny potasioma amin'ny famafazana ririnina amin'ny tany sy ny faritra klimatika rehetra mba hahazoana antoka fa mafy kokoa amin'ny ririnina ny voly.
Aleo tadidintsika fa, na eo aza ny fielezan'ny hevitra momba ny votoatin'ny potasioma ampy amin'ny tany, dia tsy mifanaraka amin'ny zava-misy izany. Ny fomba maoderina amin'ny famakafakana ny laboratoara dia tsy manome tahirin-kevitra azo antoka sy azo antoka momba ny atin'ny potasioma mora azon'ny zavamaniry. Noho izany dia ilaina ihany koa ny mijery an'io singa io rehefa miasa miaraka amin'ny voly, indrindra raha tojo olana toy ny fanala, haintany ary trano fandraisam-bahiny ianao. Ny potasioma dia mampitombo ny fanoherana ny voamadinika amin'ireo tranga rehetra ireo, manome ny fahafahan'ny rano mitazona ny ravina sy ny tanjaky ny mololo.
Mampiasà fomba voaporofo, fa aza adino fa ny fepetra miavaka dia mandaitra amin'ny toe-javatra tsy mahazatra!
Subtleties amin'ny fanaovana
Ny zezika lehibe any amin'ny faritra misy tsy fahampian'ny rotsakorana amin'ny fararano dia azo ampiharina rehefa manomana ny tany hambolena ririnina, izany hoe mialoha. Misy fanao amin'ny fametrahana amôlôma, sulfoammophos ary NPK amin'ny rotsak'orana antenaina iray volana na roa alohan'ny famafazana - mamela ny zezika hihahaka amin'ny tany izany.
Ankoatry ny endrika sy fatra amin'ny zezika dia manan-danja ihany koa ny fomba fampiharana, dia ny fizarana zezika mandritra ny famafazana. Raha omena kisendrasendra ny zezika lehibe, dia tokony ho 40-60 kg a.i. / ha ny tahan'ny fangatahana ho an'ny phosforus. Raha misy teknika ahafahana mametraka ny zezika "misesy" dia ahena ho 20-40 kg / ha ny fatra. Ny pellets dia apetraka 5 sm amin'ny sisiny ary lalindalina kokoa (izany hoe 7-8 cm diagonaly) avy amin'ny tanimboly. Ny famafazana zezika misesy dia ahafahanao mampihena ny fatra fampiharana nefa tsy mahafoy ny vokatra raha oharina amin'ny fomba fanaparitahana. Fa ny masomboly izay mamela ny fampiasana an'io fomba fampiharana io dia lafo kokoa noho ny mpanaparitaka.
Safidio ny zezika mety amin'ny toetoetry ny taninao. Manana fanontaniana? Azafady mifandraisa amin'ny manam-pahaizana momba ny EuroChem izay hanampy anao hisafidy safidy ara-tsakafo tsara indrindra ho an'ny karazan-javamaniry iray manontolo.
Serivisy agrochemical: agrodep@eurochem.ru
Source: Momba ny zon'ny dokam-barotra
Tags: EurochemMpangotraka mineralyvarimbazaha fararano
Tamin'ny taona 2021, ny complex agroindustrial rosiana dia nampitombo ny fividianana zezika mineraly vita an-trano efa ho 20%, ho 4,7 tapitrisa taonina...
Nitombo 20% ny habetsahan'ny fividianana zezika mineraly tamin'ny taon-dasa
Ny fampitomboana ny habetsahan'ny zezika mineraly dia iray amin'ireo asa lehibe amin'ny fampitomboana ny vokatra sy ny vokatra goavana. Taona lasa...
Fanadihadiana momba ny fividianana zezika mineraly amin'ny vanim-potoana vaovao. vokatra
Ny 6 Desambra, eo amin'ny tranokalan'ny fantsona telegrama an'ny gazetiboky Potato System, dia hisy ny fihaonan'ny manampahaizana avy amin'ny Vondrona Potato miaraka amin'ireo mpandray anjara amin'ny tsenan'ny ovy. Ivon’ny dinika...
Ny orinasa Moskoa "Razdolie" dia afaka manangona amin'ny 80 ha mihoatra ny 2,4 arivo taonina ovy
Manondraka ovy. Mpanadio ra. -pankasitrahana